November 18, 2018 Beekan Guluma Post in DOM-Diinqa Oromo Media,TAAJJABBII
XAWALWWAALLUMMAAN/SAGAAGALUMMAAN OPDO ITTI FUFEE JIRA; ABO Dadhabsiisuuf ija jaamsuuf shira shiruunis waanuma aggaamamedha: Lammaa Magarsaa maal ta’uuf ol fi gad fiigaa jira?
1. Toorban darbe dhimma nageenyaa irratti mariihanna sababa jedhuun Shaashamanneetti argamee ture.Har’ammoo ummata Jimmaa mariisisaa jira.Nageenya Oromoo fi Oromiyaa kan booressaa jiru humna waraanaa fi poolisaa Lammaan bobbaasaa jiru ta’uu ummatni Oromoo mirkaneessee jira.
2. Waa’ee rakkoo nageenyaa ummata waliin mariihachuun yoo barbaachise Lammaan Shaashammannee fi Jimma deemuun isa hin barbaachisu ture. Ummatni Oromoo nagaansaa boorahee miliyionaan buqqaafamaa, guyyaa guyyaan qalamee kan ajjeefamaa jiru Harargee, Booranaa fi Wallagga Lixaa keessa tti.Yoo dhugaa ummataaf quuqama ta’e Dambidoolloo maaliif hin deemne? Moyyaalee maaliif hin deemne? Ummatni Oromoo hidhattoota Beneshaanguliin qe’ee isaarraa buqqaafamee kumaatamaan bakka qubatee jiru deemee maaliif hin jajjabeessine?
3.Lammaan gama tokkoon ABO waliin araaramnee jirra jechaa gama biraan ammoo WBO tu nagaa nu dhorke jedhee lallabuu ittifufee jira.Adeemsi Lammaa naannoo rakkoon nageenyaa keessa hin jirretti argamee sagantaa dhoksaa WBO hiikkachiisuuf lafa keewwatee jiru irratti ummata mariisisee amansiisuu dha.
4. OPDO’n “Aangoon siyaasaa Oromoo harka galee jiru nu harkaa bahuu hin qabu, Oromoon tokkummaasaa jabeeffachuu qaba, ammaa booda gaaffii misoomaa deebisuu malee rakkoo biraa hin qabnu” yaada jedhu ummatatti gurgurachuuf ol fi gad fiigaa jirti.Akka Lammaanfaa yaadanitti naannoo rakkoon nageenyaa keessa hin jirretti argamuun ummata amansiisanii of jalatti hiriirsuun WBOtti duuluuf haala mijeeffachaa jiru.Dhugaan jiru garuu ummatni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiraatu “WBO’n gonkumaa hin hiikkatu” ejjennoo jedhu qabatee jira.
5. Waraanni mootummaa OPDO’n bobbaafamu WBO hiikkachiisuuf gahumsaa fi haamilee ni qabaa gaaffii jedhu yeroof haa tursinu.OPDO’n ergamtuu wayyaanee ta’uun waggootii 27 darbaniif yakka ummata Oromoo irratti rawwachaa turte itti fufuun,sababa “WBO hiikkachiisuu” jedhu afarsaa ABO qabsoo karaa nagaa keessaa baasuun,abjuu aangoo mootummaa dhuunfattee abbaa irruummaan itti fufuuf qabdu galmaan gahachuuf dhiibdee deemtii laata?
6. Deebbiin isaa ifa galaa dha.OPDO’n humna ololaa fi waraanaan gargaaramtee Oromoo fi WBO cabsuuf duula guddaa banuuf qophaahaa jirti.Fiigichi Lammaa Magarsaas qaama duula sagantaa OPDO’n baafattee jituu ti. OPDO’n yeroo gabaabaa keessatti “ABO’n waliigaltee Asmaraa hojiitti hiikuu dide; jaarsa Oromoo dhaggeeffachuu dide” jechuun duula waraanaa fi ololaa akka jalqabdu shakkiin hin jiru.Duulli kun yeroo baatii sadii hin guutne keessatti waan jalqabuuf Oromoon boqonnaa qabsoo itti aanuuf ammumaa of qopheessuu qaba.
7. Injifannoo uummatni Oromoo wareegama guddaan argate butuun aangoo mootummaa kan dhuunfatte OPDO’n sagantaan lafa keewwattee jirtu cuunfamee yoon dhiyaatu:
a.Dabballoota ABO gahumsa qaban funaananii mana hidhaatti darbachuu
b.Tooftuma wayyaaneen qinijjitii fi OBKO itti diigdeetti gargaaramuun ABO diiguuf hojjechuu dha.Hoogganoota ABO keessaa warra faayidaa fi aangoof jilbeeffatan qorachuun ofitti qabuun ABO keessatti hookkara uumuu dha.
c. ABO waliin filannoo dorgomuun aangoo mootummaa qabannee itti fufuu hin dandeenyu waan ta’eef sababa WBO hiikkachiisuu jedhuun ABO qabsoo karaa nagaa keessaa dhiibbanii baasuu dha.
d.Ihadig popularity Dr.Abiy ijaarratetti gargaaramuun aangoo isaa itti fufsiisuuf filannoon dura sirna mootummaa gara “presidential” tti jijjiiruun aangoorra turuu qaba.
”There were even widespread rumors that Dr. Abiy envisaged establishing a presidential system, a modern way to fit into the mold and don of the apparel of the traditional “Big Man” – the “teleq säw” – in Ethiopian politics. “Ethiopia: Climbing Mount Uncertainty,October 21, 2018 by René Lefort
e.Waraana bakka adda addaatti labsuu fi ummattoota bakkoota hedduutti ta’e jedhanii walitti buusuun sababa “ dursee nageenyi biyyittii tasgabbaahuu qaba” jedhuun yeroo filannoo biyyoolessaa dabarsuu dha.
f. Bifa biraatiinis OPDOn maallaqa gurguddaa dhngalaasuutiin namoota ejjennoo hinqabne bituutti bobbaateetti. Kun waan qabatamaa hedduutu jira.
Qeerroofi Qarreen Maal godhuu qabaree/
Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo taliiguun galiin gahuuf gumaacha isarra eegamu bahataa qabsoo isaa jabeessee hanga Bilisummaatti cichee falmataa jira. Gaaffiin Qeerroon gaafatu gaaffii saba Oromoo fi saboota Cunqurfamoo impaayera biyyaatti ta’ee utuu jiruu, mootummaanis ta’ee dhaabbileen falma mirga dhala namaa fi kanneen uummatichaaf qabsaa’an dhaga’uufii dhabuun gaaffii Qeerroo ukkaamsanii ajandaa siyyaasaa isaaniif kan socho’an taanaan ofii isaanii of balleessuun ala uummatichaaf gufuu ta’uu akka hindandeenye akeekuun hawwa.
Qeerroo fi uummatni Oromoo erga araarri ABO fi Mootummaa gidduutti godhamee as yaaddoo guddaan keessa jiraatuun isaa beekamadha. Ka jalqabaa shakkii gurguddaa malaaf tooftaa ittiin nu nyaatan baafatnii ka jedhuun akka yaadda’aa ture ifaadha. Kun akkasuma ta’ee gama araaraa ABO ilaalchisuun adeemsa araaraa jalqabame karaa nagaa xumuruu dhabuurraa waraana WBO tti duulchisuun mootummaa cimsee akka uummatni balaaleffatuuf of eeggatu taasisee jira. Waayita ilmi Oromoo akka Hantuutaa waraanamee du’aa jirutti, hidhannoo meeshaa muraasa akka Oromootti WBO’n qabu WBO irraa hiiksisuuf sochiin godhamuun qaamota Bilisummaa Oromoof dhaabbatan mara mufachiiseera.
Yakka gurguddaa raawwataa kanneen turaniif uummatni dhiifama haa godhuuf jechaa yakka biraammoo dhalachanii guddisaa kan jiran Mootummaa ta’uu utuu beekamuu, uummata obsa fixateen obsi jechuu qofaan abidda keessatti uummata ittisuuf akeekuu qaamota OPDO (PDO) hundarra Qeerroo mufachiisee jira.
Meeshaa Waraanaa gurguddaa magaalaa Finfinnee galchaa kan jiru halagaan, Oromoota naannoo Finfinnee jiraniif yaaddaa’uurraa falaaf malli Qeerroo qabsoo isaa itti muddee humna garboonfattootaa hundeen buqqaasee gatuu akka ta’e itti amanee qabsoo finiinsuuf murate.
Adeemsa Araaraa milkeessuuf akka waadaan galametti waadaa ABO eeguu dhabuun OPDO uummata cimsee aarsuurraa qabsoon finiine. ABO dhaaf Waajjira gahaan Finfinnee keessaa anga har’aa hinbanamiin jiraatuun, waajjirri ABO akka hinbanamne shira garaagaraa xaxuun OPDO addatti aarsuurraa kan ka’e Qeerroo mudhii jabeeffachiisee jira. Rakkoowwan ABO mudataa jiran, gurguddoon dhabinsa Waajjiraa fi Konkolaataa Geejibaa ta’uu utuu beekanii gama Mootummaatiin waan irratti walii galan haaluun, gama uummataan ammoo rakkoon ABO maal akka ta’e beekuu dhabuun rakkoo biraan akka dhalatu taasiseera.
Miidiyaaleen maqaa Oromoon dhaabbatan sagalee uummata Oromoo ta’uu dhabuurraa rakkinni uummatarra gahu akkuma kaleessaa ukkaamfamaa jiraachuun ammas badiin akka babal’atu taasisuun deddeebi’ee uummatni akka onnatuuf aaru taasisee jira. Akkasuma Oromiya Midiyaa Network (OMN) jedhamu maqaa Oromoon sabbata aayyoof Boorsaa aabboon haa dhaabbatu malee, maallaqni funaanamu Odiitii ta’uu dhabuuf uummataaf ibsamuu dhabuun shakkii jiru babal’isuun adeemsa egeree qabsoo Oromoof wal amantoo dhorkataa jira. Irratti dabaluun rakkoo sabaa ajjeechaa jumulaa nurratti raawwatu haalaan jala bu’ee gabaasuu dhabuu miidiyaalee Oromoo hundaa uummata mufachiiseera. Actiivistootni biyya alaa galanis gaafa biyya gahan akka gaafa halaala jiranii rakkoo uummataa gabaasuu sodaachuun uummatni akka waan qabe jabeessee galiin gahuuf ofirratti hirkatee hanga Bilisummaatti akka qabsaa’uu qabu godhaa jira.
Duchaatti yaaddoon Qeerroo yaaddoo uummata Oromoo ta’uu hubatuun ABO’f uummata addaan dhiibuurraa akka of qusatan qaamota diina uummataa ta’aniif himuun barbaachisaa taati. Uummatnis roorroo isarra gahaa jiru callisee walirratti ilaaluu dhiisee roga maraa akka falmannu wal hubachiisuu qabna.
Qeerroon bilisummaa barbaadu qabsoosaa finiinsuutu irraa eegama. OPDOn guutummaatti waan baayyee haalaa jirti. Waan mumul’ataa jiru hundi itti fakkeessaadha; gowwoomsaadha. Nama hedduurraatti diniina siyaasaa kaa’uutiin afaan hiiteetti. Yeroon ka’an ammadha; walajajjabeessuun qabsoo qixa danda’ame maraanii finiinsaa. Bilisummaan saba Oromoo hamma OPDOn jirtutti nijiraata jedhanii yaaduun abjuudha.
Beekan G Erena, 11/18/18